Sekretera SMPTE Hollywood hitrandraka ny "ala lalina" tamin'ny fivoriana tamin'ny volana novambra - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » SMPTE Hollywood Fizarana hitrandraka ny "lalina lalina" tamin'ny fivoriana tamin'ny Novambra
SMPTE Hollywood Fizarana hitrandraka ny "lalina lalina" tamin'ny fivoriana tamin'ny Novambra
Ny tontolon'ny manampahaizana dia handinika ireo teknolojia mipoitra mba hahafahana mamorona olombelona synthetika ho fialamboly sy tanjona misimisy kokoa.
Los Angeles - The Hollywood fizarana ny SMPTE®, ny fikambanana mamaritra ny hoavin'ny tantara, dia handinika ny toky, ary ny mety ho loza mety hitranga amin'ny olombelona nomerika sy ny antsoina hoe lalina ao amin'ny fivoriana isam-bolana amin'ny talata, Novambra 19, ao Hollywood. Natao niaraka tamin'ny Radio, Television, Digital Newsroom Association (RTDNA), ny hetsika maimaim-poana dia hisy fifanakalozan-dresaka ataon'ny manam-pahaizana momba ny sehatry ny olombelona nipoitra.
Ny sary lalina dia sarin'olombelona azo itokisana amin'ny alàlan'ny teknikan'ny faharanitan-tsaina voajanahary avy amin'ny singa tsy misy marina na tsy tena misy na "sandoka". In Hollywood, olombelona nomerika, maharesy lahatra ny mamitaka ny mpihaino, no fahatsentsenan'ny fijerena fahitana nandritra ny am-polony taona maro. Ireo teknika roa ireo dia natao hamitahana ilay mpijery, fa raha ny olona digital no namboarina mba hialana, dia azo ampiasaina hamitahana sy diso ny fotony matetika, matetika ho an'ny tanjona tsy fialamboly.
SMPTE Hollywood ary ny RTDNA dia hanolotra fampisehoana tanteraka momba ny lalina sy ny olombelona nomerika. Ny tontolon'ny panoritsoritana ny tantaran'ny olombelona nomerika sy ny lalina, ny fanamby tafiditra amin'ny famoronana azy ireo maharesy lahatra, ary raha / ahoana ny fahitan'ny matihanina ny vaovao sy ny fialamboly dia mihamalalaka.
Ny mpanatrika dia ahitana ny Chaos Group Lab lehiben'ny fikarohana sy fampandrosoana an'i Christopher Nichols, izay mitarika ny Digital Human League, mpanohana ny loharanom-baovao misokatra Wikihuman; Niko Pueringer ao amin'ny corridor Digital, izay namokatra votoaty fohy amin'ny Internet nandritra ny folo taona mahery ary manampahaizana amin'ny fananganana sy ny famoronana ala lalina; ary Shruti Agarwal, Ph.D. mpianatra ao amin'ny Departemantan'ny Electrical Engineering sy Computer Science ao amin'ny University of California, Berkeley, izay manao fikarohana ao Multimedia forensics. Ilay mpanao gazety Freelance Debra Kaufman (USC Entertainment Technology Center, New York Times, Los Angeles Times, Wired, Reuters, Bloomberg American Cinematographer, Magazine Cinematographers International Guild Magazine) dia hanamora ny resaka.
Kaufman sy Linda Rosner no mpamokatra ny hetsika.
Inona: SMPTE Hollywood Fizarana, Fivoriana novambra
Lohahevitra: Olom-pirenena dizitaly sy lalina: Fampanantenana famoronana sy loza
Rahoviana: Talata 19, 2019. 6: 30 tolakandro - mpandray ny 7: 30 hariva - Fampisehoana sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny tontonana.
Aiza: Hollywood American Legion Post 43, 2035 N. Highland Ave., Los Angeles, CA 90068
Parking: Ny toerana fijanonana voafetra ho an'ireo manana takelaka HANDICAPPED na izay mila manakaiky akaiky dia azo alaina ao ambadiky ny FIKORANANA AMERIKA. Ny mpanatrika rehetra dia tsy maintsy avela hipetraka any amin'ny toerana avo ACROSS Highland ao amin'ny Camrose Dr / Milner Road. Ity atiny ity dia eo anoloana fotsiny Hollywood Lapan'i DeMille lova.
TOUR MAIMAIMPOANA: Fitsidihana notarihin'ny Legion Amerikanina manan-tantara #43, natsangana ao amin'ny 1929 dia hasaina amin'ny fahatongavan'ireo vao tonga. Ny fitsidihana dia hisy ny booben'ny fametrahana maoderina miaraka amin'ny 35 /70 MG FILM sy asongadinana Christie 4K DIGITAL projection. Azafady mba manondro amin'ny EVENTBRITE ny safidinao fitsidihana amin'ny 5, 5: 30 na 6 tolakandro.
SMPTE Hollywood Ny fivoriana fivoriana dia maimaimpoana. Ireo mpikambana tsy mpikambana dia raisina.
About the SMPTE® Hollywood Faritra
The Hollywood fizarana ny SMPTE® dia nokarakarain'ny fizarana tany amin'ny faritra andrefan'i CST amin'ny 1928. Androany, tahaka azy manokana SMPTE Region, dia mahafaoka mihoatra noho ny 1,200 SMPTE Mpikambana miaraka amin'ny tombontsoa iombonana amin'ny fitarafana mihetsika-teknolojia ao amin'ny Greater Los Angeles faritra. The Hollywood Fizarana manome maimaim-poana isam-bolana ny fivoriana izay misokatra ho SMPTE Mpikambana sy tsy mpikambana. Ny fampahalalana momba ny fivoriana dia navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny fizarana www.smpte.org/Hollywood.
Ny Society of Motion Picture and Television Engineers®, na SMPTE, dia mamaritra ny hoavin'ny tantara. Ny tanjon'ny Fikambanana dia ny mamela ny rafitra ara-teknika izay ahafahan'ny vondrom-piarahamonina manerantany manangana ny media ho an'ny tontolon'ny zavakanto, fanabeazana ary fialamboly ary mizara izany votoatin'ny tombontsoa sy ny fahafinaretan'ny olona eran'izao tontolo izao. Amin'ny maha-fiarahamonina mpirotsaka an-tsitrapo manerantany, teknolojia, mpamorona, ary mpamorona, SMPTE dia mandray anjara amin'ny fitondrana ny kalitao sy ny fivoaran'ny sary, ny fahitalavitra ary ny media matihanina. Ny Fikambanana dia mametraka ny fenitra indostrialy izay manampy ny orinasa hamenoana ny tsenan-tsolitany ho sarobidy kokoa, manome fanabeazana manan-danja izay manohana ny fitomboan'ny karaman'ny mpiasa, ary manentana ny vondrom-piarahamonina mavitrika sy samihafa.
Fampahalalana mikasika ny fidirana SMPTE dia hita ao amin'ny smpte.org/join.
Momba ny RTDNA
Ny Radio Televiziona Vaovao momba ny fahitalavitra (RTDNA) no fikambanana matihanina lavitra indrindra manerantany natokana manokana handefasana sy fanaovana gazety an-tsoratra. Natsangana ho fikambanana bozaka anaty ao 1946, ny tanjon'ny RTDNA dia ny hampiroborobo sy ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety mandray andraikitra. Miaro ny zon'ny mpanao gazety elektronika manerana ny firenena ny RTDNA, manome voninahitra ny asa miavaka amin'ny asa amin'ny alàlan'ny Edward R. Murrow Awards ary manome fiofanana ho an'ireo mpikambana mba hampirisihana ireo fitsipi-pitondran-tena, fitarihan'ny efitrano fianarana ary fanavaozana ny indostria.
Famantarana rehetra niseho Izao no fananan 'ny tsirairay avy ny tompony.
Zavatra tsy mitovy dia mamporisika ny Spectrum finday amin'ny alàlan'ny "Spectrum" amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsara - Desambra 10, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 deepfake Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor MStar SMPTE SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 THE COLONIE / Chicago TV Technology Video injeniera Visual Effects	2019-11-06
Previous: KBUE-FM LBI Media Inc.: Ny Radio Radio nomerao voalohany